अक्षय कुमारको फिल्म बेलबटम माथि खाडीका यी तीन देशले किन लगाए प्रतिब’न्ध ? – Dailny NpNews
अक्षय कुमारको फिल्म बेलबटम माथि खाडीका यी तीन देशले किन लगाए प्रतिब’न्ध ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०९, २०७८ समय: १५:०१:०८
एजेन्सी : को’रो ना लकडाउन र प्रतिबन्धका बीच थुप्रै महिनापछि सिनेमाघर मालिकले त्यति बेला राहत पाए जब अभिनेता अक्षय कुमारको फिल्म ‘बेलबटम’ १९ अगस्टमा ठूलो पर्दामा रिलिज भयो । तर संसारभरी रिलिज भएको बेलबटम माथि खाडीका तीन देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ । साउदी अरब, कुवेत र कतारमा यो फिल्मको प्रदर्शनमा अनुमती पाएको छैन ।
फिल्म बेल बटमका निर्माता हुन् मधु भोजवानी, ज्याकी भगनानी, वाशु भगनानी र निखिल अडवाणी। बेलबटममाथि तीन खाडी देशमा लागेको प्रतिबन्धमाथि फिल्मका निर्माता मधु भोवानीले भने, ‘फिल्म प्रदर्शन नगर्ने निर्णय हरेक देशको निजी मामिला हो। हामीले एउटा फिल्म बनायौं जुन सत्य घ’टनामा आधारित छ । त्यो हिसाबले हामीले मानिसहरु वा पात्रलाई दर्साएका छौं । धेरै कुरा काल्पनिक पनि छन् । कुनै देशले यस्तो निर्णय लिएको छ भने त्यो उनीहरुको नीजि मामिला हो । यस बारे हामी केही भन्न सक्दैनौं ।’
चर्चित ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटाले भने, ‘फिल्मलाई यी तीन देशमा कन्टेन्टमाथि आपत्तिटका कारण रिलिजको अनुमति दिइएको छैन ।’ कन्टेन्टको विषयमा के आपत्ति हुनसक्ला, यसबारे मधु भोजवानीले भने, ‘हामीले यस माथि कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौं ।’
प्रतिब’न्धका कारण : वास्तवमा यो फिल्म विमान अप ह’रणको कहानीमा आधारित छ । यसको कहानी सन् १९८४ मा भएको एक विमान अप ह’रणमा आधारित भएको बताइन्छ । त्यति बेला यात्री विमानलाई अप ह’रण गरेर लाहौरबाट दुबई ल्याइएको थियो । सन् १९८४ मा भएको वास्तविक घटनाका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्सका तत्कालीन रक्षामन्त्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूमले व्यक्तिगत रुपमा स्थिति सम्हालेका थिए र संयुक्त अरब इमिरेट्सका अधिकारीले अप ह’रणकर्तालाई प’क्रा उ गरेका थिए ।
तर यो फिल्ममा सिक्रेट मिशनलाई भारतीय अधिकारीले नै पूरा गरेको देखाइएको छ । त्यसैले फिल्ममा तथ्य माथि छे’डछाड गरिएको मानिएको छ । यद्यपि, यो फिल्म माथि लागेको प्रतिब’न्धका कारण आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।